Ukulahla iintlanzi: isilwanyana se-UGLYst kwihlabathi liphela | Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha ngentlanzi ekhethekileyo. Kwaye ndithetha ngokukhethekileyo kuba I-2013 yathathelwa ingqalelo njengesilwanyana esona sikhohlakeleyo emhlabeni. Imalunga nentlanzi yokuwisa.
Intlanzi yokulahla, enegama lenzululwazi (i-Psychrolutes marcidus) ikwabizwa ngokuba yi-blur fish okanye janaira. NgesiNgesi yaziwa njenge globfish. Ingesosapho lwentlanzi enentloko etyebileyo kwaye ineempawu ezithile ezenza ukuba ikhetheke kwihlabathi leentlanzi. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi ngesona silo sibi ehlabathini?
3 Ukutya kunye nokuziphatha
5 Isongelo sentlanzi
IDropfish inokufumaneka emanzini anzulu kwilizwekazi laseTasmania nase-Australia. Ifumaneka kwezi ndawo ikakhulu, nangona sinokuyifumana kwi amanzi eNew Zealand.
Yintlanzi enqabileyo ngaphezulu, ke kunzima ukuyibona ngamehlo. Ngokwesiqhelo ifunyenwe kubunzulu phakathi kwe-900 kunye ne-1200 yeemitha apho uxinzelelo lwamanzi luphindwe kabini kunolo lwasentla kolwandle. Esi sesinye sezizathu zokuba kutheni le ntlanzi ingaziwa kakuhle.
Akuqwalaselwa nje njengesilwanyana esibi kunazo zonke ehlabathini ngobuso babo okanye ukubonakala kwayo, kodwa kunye nesikhumba sayo. Inyama yezi ntlanzi ifuna ukudada kwaye ke ngoko yenziwa sisihlunu esine-gelatin kunye noxinano olungezantsi kunolo lwamanzi. Ngombulelo kolu hlobo lwesikhumba esincinci esincinci, luyakwazi ukudada kumgangatho wolwandle ngaphandle kokuphulukana namandla okuqubha.
Abantu ababone le ntlanzi bathi ikhangeleka iyinto ecekisekayo kwaye i-gelatinous touch iyothusa. Unombala wekrimu kwaye ubude be-30 ukuya kuma-38 cm ukuyenza ukuba ibe yintlanzi enkulu ngokwaneleyo.
Ukuba nomzimba oxineke kangako, abanamandla angako. Ke ngoko, azizizo iintlobo ezisebenzayo kwaye azisoloko zizingela amaxhoba azo. Bondla kwizinto abazifumana endleleni. Ngenxa yokunqaba kwayo okugqithileyo, uninzi lwezazinzulu luye lwabuthandabuza ubukho bayo bokwenyani, njengoko kubonakala ngathi ifilimu yesayensi kunokuba yenzeke. Kodwa ngamanye amaxesha kuya kufuneka uthobele eli lizwi "ubunyani budlula intsomi".
Inentloko enkulu kakhulu kunye namaphiko amancinci, ngasemva nangomsila. Ibizwa ngokuba yi-drop fish kuba imile okwethontsi lamanzi xa iwe. Entloko inempumlo enkulu exhonyiweyo kwaye ijikeleze kwaye amehlo amabini abekwe kwikona apho kuzalwa khona impumlo. Omabini amehlo kunye nempumlo zinoburhabaxa obufana nejeli obenza bube grosser.
Ngokubhekisele kubuninzi bobunzima kunye nobunzima bomzimba, kufuneka kuthiwe ziphantsi kakhulu ukuba zingadada elwandle ngaphandle kokuchitha amandla abo ngokudada. Ngokungafaniyo nezinye iintlanzi, akanaso isinyi sokuqubha. Eli lungu liqhelekile kuninzi lweentlanzi kwaye zilisebenzisa ukuze zikwazi ukuhlala emanzini zidada ngaphandle kokuza ngaphezulu. Lilungu elibalulekileyo kuzo zonke iintlanzi. Nangona kunjalo, intlanzi yokulahla ayinayo kuba ayiyifuni. Ngobunzima obuphantsi kunye noxinano olunalo umzimba wakho, kwanele ukukugcina udada ngaphandle kwesidingo sokuqubha.
Iintlanzi ziphantsi koxinzelelo oluphezulu ukusuka kubunzulu bamanzi. Ngombulelo kwibhola yokuqubha bayakwazi ukoyisa loxinzelelo ngaphandle kokuwohloka. Ewe, intlanzi yokulahla iye yahluka-hlukeneyo eyenza ukuba umzimba wayo ube noxinano olusezantsi. Esi sizathu sokuba le ntlanzi inokuhlala kuphela kwezi zinzulu.
Kubude obungama-38 cm ubude, ayisiyonto eqaqambe kakhulu, kodwa iyatsala umdla xa ujongwa ubukhulu obukhulu bentloko ngokubhekisele kuwo wonke umzimba. Ngombulelo kulwakhiwo lomzimba wayo, iyakwazi ukumelana namaqondo obushushu asezantsi kakhulu. Ezona zilungileyo ziphakathi kwe-2 kunye ne-9 degrees Celsius.
Kuba itya ngokufumaneka kulwandle, ukutya kwayo kwahluka kakhulu. Bayakwazi ukondla kuzo zonke iintlobo zezinto eziphilayo ezingqongileyo. Ezo zinqunyanyisiweyo emanzini zezona zihamba rhoqo. Sifumana ii-crustaceans ezincinci kunye ne-mollusks, ezinye izinto eziphilayo kunye ne-urchins zaselwandle.
Nangona ingenawo amazinyo okuhlafuna ukutya, le ntlanzi Akanangxaki xa esitya naluphi na uhlobo lokutya, Kuba banenkqubo yokugaya ukutya enokubambisa okukhulu kunye nokubola.
Kuba ukutya kula mazantsi enzonzobila yolwandle akukho kuninzi kakhulu, intlanzi yokulahla idada ngokuzola ngaphandle kokuphelelwa ngamandla okulindele ukufumana ukutya. Ayilulo uhlobo oluzingela ixhoba lalo.
Ukuzaliswa kwakhona kwale ntlanzi, kunikwe indawo yokuhanjiswa kwayo, kunzima ukuyazi. Ukongeza, luhlobo olufunyenwe kungekudala, ngenxa yoko akukho lwazi lungako. Ngamanye amaxesha kuye kwaxelwa ukuba ezi ntlanzi zizalela amaqanda kulwandle kwaye zihlala kwindawo ezingqonge ukuzikhusela nokuzijonga. Ezi zibini zibekwe phezu kwazo ngendlela efanayo nendlela ezenziwa ngayo iintaka.
Xa iintsuku zihamba kwaye amantshontsho aqanduselwa emaqandeni, abazali abayi kwahluka kubo ukukhusela kumarhamncwa. Benza oku kuba elwandle abukho ubulembu okanye amatye apho amaqanda anokukhuselwa khona ngeliso lenyama kwabanye. Awunakho ukubeka amaphepha ukuwagquma.
Xa imazi izalela amaqanda, iyakwazi ukubeka amawaka aliqela kuzo kwaye amaqanda abo apinki kwaye awamhlophe, njengoko kuqhelekile.
Nangona ezi ntlanzi zihlala ezinzulwini zisoyikiswa zizenzo ezithile zomntu. Okokuqala kungenxa yokuloba okungaginyisi mathe kweenkampani ezithile zaselwandle. Inkqubo yokuloba itshabalalisa ulwandle kwaye ichaphazela ukuwa kweentlanzi, phakathi kwezinye iintlobo ezininzi.
Nokuba intlanzi ayibanjwanga ngokupheleleyo, ukuyisusa kubunzulu bayo kunokuwuchaphazela umzimba wayo. Utshintsho lwequbuliso lubachaphazela kakubi.
Njengoko ubona, kulwandle olunzulu kukho zonke iintlobo zeentlanzi ezikhethekileyo ezingasoze zisimangalise.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Ukulahla iintlanzi